Dalka Zimbabwe oo ka bilaabatay tirinta codadka doorashada ka socotey | allsaaxo online
Dalka Zimbabwe oo ka bilaabatay tirinta codadka doorashada ka socotey
Dalka Zimbabwe ayaa waxaa ka bilaabatay tirinta codadka doorashada iyadoo doorashadan ay tahay tii ugu horeysay ee ka dhacda dalkaas tan iyo markii talada laga tuuray Robert Mugabe.
Tirada Murashixiinta ayaa u tartamaysa xilka Madaxweynaha dalka Zimbabwe ayaa gaartey 33 Murashax, iyadoo hogaamiyaha xisbiga ZANU-PF Madaxweyne Emmerson Mnangagwa oo 75 jir ah, uu si adag ula tartamayo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ninka 40 jirka ah Nelson Chamisa.
Dadka u soo baxay inay codadkooda dhiibtaan ayaa aad u sareysay iyadoo dad ka badan shan malyan oo ruux loo diiwaangeliyay inay codeyn karaan.
Waxaana markii ugu horeysay ay goobjoogayaal caalami ay ka soo qayb galaan doorasha dalkaasi tan iyo sanadkii 2002-dii
goobjoogayaasha iyo kormeerayaasha doorashadan ka socday qaarada Yurub iyo Maraykanka.
Doorashooyinkii hore e ka dhici jirey dalka Zimbabwe ayaa waxaa hareyn jirey cabsi gelin iyo hanjabaadyo ka imanaya Maamulka xilka hayey balse doorashada dhacday ayaa ahayd mid ku dhacday jawi nabdoon.
Elmar Brok madaxa goobjoogayaasha ka socday Midowga Yurub ayaa sheegay in doorashada ay ku dhacday si wanaagsan balse meelaha qaar aan si wanaagsan loo habeyn.
Dalka Zimbabwe ayaa doorashadan ay dhacday iyadoo uusan wax lug ah ku lahayn Robert Mugabe oo muddo dheer soo xukumayay dalka ku yaal Koofurta Afrika.
Natiijada doorashada ayaa la filayaa in lagu dhowaaqa maalinta Sabtida ee soo socota, waxaana doorasho labaad la geli doonaa haddii uusan musharax helin codad ka badan boqolkiiba konton. Doorashada labaad ee ku celiska ah ayaa la qorsheeyay in ay dhacdo bisha September ee soo socota.